‘नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, यो तहमा संक्रमण नबढ्ला भन्ने ठानेको थिएँ’ - Kohalpur Trends
२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को संक्रमण यो तहमा बढ्ला भनेर आफूले आँकलन नगरेको स्वीकार गरेका छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएयता प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता असाधारण रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । २८ जेठ, २०७७ मा संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यही दोहोर्‍याएपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले ‘हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भर्खरै सुन्नुभयो नि मैले भनेको, त्यो त मैले भनें’ भनेर ओठे जवाफ फर्काएका थिए ।
तर एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बुझाइ गलत भएको स्वीकार गरेका छन् । शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले के ठानेको थिएँ भने हाम्रो इम्युन सिस्टम धेरै स्ट्रोङ छ । त्यसकारण अलिअलि सर्ला, यो तहमा वृद्धि हुन सक्दैन । तर यस तहमा वृद्धि भयो । सामान्य इम्युन सिस्टमले पनि यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्दोरहेनछ ।’
यद्यपि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको काम छैन भन्ने नभएको उनले बताए । ‘जति मान्छे रिभाइभ भएका छन्, त्यसमा पनि अवश्य पनि इम्युन सिस्टमको भूमिका हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना सरेर पनि फोक्सोमा पुग्न नदिने उपाय हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो राखेका छन् ।
‘मेडिकल हिसाबमा पनि कोभिड सरेर पनि लङ्समा जानबाट कसरी जान नदिने भन्ने उपायहरु पनि होला नि ? यो उपायमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ,’ सम्बोधनका क्रममा उनले भने भने, ‘नाकबाट सर्छ भने अन्यत्र ट्रान्समिट हुन नपाई नाकमै त्यसलाई खत्तम पार्ने, थ्रोटमा सर्छ भने लङ्समा जान नदिई थ्रोटबाटै खत्तम पार्ने उपाय पनि हुन्छ होला । त्यो पनि अपनाउने जसले गर्दा अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगाउनुपर्ने विन्दुमा मानिस नपुगोस् ।’
Previous Previous post: कोभिड रोकथाममा कुनै कसर बाँकी नराखेको नेपालगन्ज उपमहानगरको स्पष्टोक्ति
Next Next post: चौधरी फाउन्डेसनले वीरमा आईसीयू वार्डसहित धनगढी र सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने